Zụlite njem na Kuwait na Accor ụzọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Zụlite njem na Kuwait na Accor ụzọ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • ndị mmadụ • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Site n'aka-ekpe-Sebastien-Bazin-Sheikh-Mubarak-AM-Al-Sabah-Gaurav-Bhushan-na-Kuwait nke-White-Obí
Kuwait abụghị nnukwu njem na njem njem. E nwere ụfọdụ ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ chọrọ ịtụgharị nke a - ụzọ Accor.
Kuwait abụghị nnukwu njem na njem njem. Enwere ụfọdụ ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ chọrọ ịtụgharị nke a.
Otu n’ime ha bụ onye isi oche nke ndị omebe iwu Action, Sheikh Mubarak AM Al Sabah. Ọ kwadoro nzukọ gburugburu na White House nke Kuwait n'oge na-adịbeghị anya ya na Onye isi oche na onye isi oche nke Accor International, Sebastien Bazin.
Mkparịta ụka ndị a gbadoro ụkwụ na mmụba nke njem nleta na nnabata ọbịa na Kuwait na mpaghara ahụ ma tinyekwa onye isi oche Accor, Gaurav Bhushan yana ndị otu ndị ọzọ.
A tụlere ọtụtụ echiche gbasara mmalite na mmepe nke njem na Kuwait na mmelite nke ohere maka imekọ ihe ọnụ na France na mba ndị ọzọ nke Accor na-elekọta ụlọ oriri na nkwari akụ.
Chakwasa ihie ahụ etinyebere n’achọ ọkọnọ akpọrọ akụ na ụba na ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ midscale. Mmekọrịta Action-Accor nwere ike ịmepụta, mepee ma rụọ ọrụ dị elu, ọnụ ọnụ, ụlọ obibi akara maka ndị maara ihe, mmefu ego na ndị njem ezumike.
N'ezie, Action Hotels plc abụrụla onye nwe ụlọ, onye nrụpụta na onye njikwa akụ nke ụlọ nkwari akụ atọ na nke anọ na mpaghara ndị mbụ na Middle East na Australia.
Pọtụfoliyo ụlọ ọrụ ahụ ugbu a nwere ụlọ ọrụ iri na anọ na-arụ ọrụ, nke 14 dị na Middle East na anọ na Australia. Nke a gụnyere ụlọ nkwari akụ 10 nke Accor jikwaa gafee ọkọlọtọ atọ, ibis, Mercure na Novotel. Ka ọ dị ugbu a, Mercure Riyadh Olaya na Novotel Dubai Creek ga-emeghe na 11
Ụgbọ elu Prototype dara na Russia wee gbuo mmadụ niile ...
Israel weghachite iwu nkpuchi naanị ụbọchị 10 ka ...
Njem US: Zere nlọghachi azụ na-enweghị isi na akụ na ụba ...
Qatar Airways gbasaa ule IATA Travel Pass
Mohonk Mountain House nkwari akụ na New York: Presidential ...
Disaster Tourism n'uzo na ezighi ezi na Holland: Ọ dịghị ebe dị mma ...
World Tourism chọrọ enyemaka, na Saudi Arabia bụ ...
Ndepụta nke Akwụkwọ na -akpali akpali nke ukwuu iji nyere gị aka ito eto
Uzbekistan na-agbatị COVID-19 Mgbochi 'Ruo ...
Atụmatụ njem: Ebe Gen Z, Millennials na Gen X na -emegide ...